Ahoana ny fomba hampijanonan'ny alika ny fivalanana ao anaty trano | Alika Manerantany
Ahoana ny fomba hampijanonan'ny alikako ny fivalanana ao anaty trano
Anthony Carter | | Training, Alika ankapobeny
"Raha tsy tonga any aminao ny alika rehefa mijery ny tavanao, dia aleo mody ianao ary diniho ny feon'ny fieritreretanao." Woodrow Wilson- Politisiana amerikana sy mpisolovava, filoham-pirenena amerikanina faha-28
Tamin'ny lahatsoratro teo aloha tamin'ny herinandro lasa teo, efa niteny anao aho inona ny antony lehibe? izay nahatonga ny alikanay hanohy hanamaivana ny tenany ao an-tranonao. Ianaro fotsiny ny antony lehibe indrindra, izay amiko tsy misy hafa fa ny tsy fahaizan'ny olombelona mampianatra alika kely amin'ny alàlan'ny herisetra sy famoretana, izay mitovy amin'ny zazakely. Zava-dehibe tokoa izany. Andao hoy aho hoe 98% amin'ny fotoana. Ary mitandrina aho.
Alika kely, raha toa ka tavela amin'ny lesoka izy ary nianatra araka ny tokony ho izy, dia manana ny fahafaha-manao rehetra mety hianarana izay toerana tokony hanamaivanana ny tenany ary tsy iza fa ny eny an-dalambe. Ary izany no hianarantsika eto. Raha tsy misy resaka intsony, anio dia avelako ianao hiditra, "Ahoana ny fomba hampijanonan'ny alikako ny fiotrika ao an-trano". Manantena aho fa izany dia manazava ny fisalasalanao.
Ny fahazoana ny alikantsika hanomboka hamindra eny an-dalambe dia tsy raharaha iray andro, fa tsy roa, ary tsy misy teknika tsy mety diso (satria miankina amin'ny antony mahatonga ny biby hanamboatra azy ireo), na ny master formula, na ny fanafody mety. Tokony hazava be izany hatramin'ny voalohany.
Raha mampihatra ny iray na ny sasany amin'ireo teknika ampianariko ato amin'ity lahatsoratra ity ianao ary manohy ny alika tsy mijanona hanamaivana ny tenany ao anaty trano, Manoro hevitra anao aho mba hitady Mpanabe Canine manana traikefa azo porofoina. Tsy voavaha ny olana rehetra amin'ny famakiana lahatsoratra amin'ny magazine na bilaogy. Ambaratonga voalohany ihany raha resaka famahana ny olana. Raha hitantsika fa tsy misy fihatsarana dia mila manatona matihanina isika.
Alohan'ny hanombohanao mamaky ity lahatsoratra ity, dia mamporisika anao aho hamaky lahatsoratra roa teo aloha, toa azy ireo Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga antsika olombelonaary Fa maninona ny alikako no manala ny tenany ao an-trano? ity farany dia tsy maintsy vakiana.
Hanao toko roa amin'ity lahatsoratra ity aho, ny iray natokana hampiofanana alika alika kely hatramin'ny voalohany, ary ny iray hafa amin'ny fomba hanandramana hamaha ny olana amin'ny alika olon-dehibe, zavatra somary miasa mafy kokoa. Andao atomboka.
1.1 Mampianatra hatramin'ny voalohany
1.1.1 Puppy dia zazakely
1.1.2 Tombantombana sy fanaraha-maso
1.1.3 Fitiavana sy arahaba soa
1.2 Fiofanana mikiaka amin'ny taratasy
1.2.1 Fahitana mialoha
1.2.2 Ary ankehitriny, fanaraha-maso
1.2.3 Ahoana no manadio
1.2.4 Tena ilaina ny feon'ny feo
1.2.5 Misy rano foana eo am-pelatananao
1.2.6 Ary amin'ny alina
1.2.7 Rehefa maka dia safidy
1.2.8 Mamindra izany
1.2.9 Ahoana ny fomba itondrana azy eny amin'ny arabe
1.2.10 Fetsy mora indroa
1.2.11 ny fitiavana no lakile
2 Alika olon-dehibe
2.1 Fomba hafa
2.2 Adin-tsaina amin'ny alika olon-dehibe
2.3 Ny fomba tsotra indrindra tsy mety
2.4 Ohatrinona no angatahinay amin'ilay alika?
2.5 Fantaro ny olana
2.6 Ny safidy mety
2.7 Tokony hanana faharetana isika
Mampianatra hatramin'ny voalohany
Ny fanabeazana alika alika kely amin'ny uriny sy ny fahalavoana ivelan'ny trano dia manana lakile telo lehibe, izay tsy maintsy dinihina miaraka amin'ny lanjany:
Puppy dia zazakely
Manantena aho fa nazava izany tao amin'ny lahatsoratra teo aloha izay niatrehako an'io lohahevitra io, satria ilaina ny mahatakatra an'io. Ny zaza alika kely dia tsy afaka mitazona ny sphincter mandritra ny fotoana maharitra. Tokony horaisina izany. Tsy maintsy manala ny tenanao indray mandeha isaky ny 60 minitra farafahakeliny ianao, ary atoro ny fiofanana an-taratasy, izay hazavaiko ao aoriana.
Tombantombana sy fanaraha-maso
Amin'ny voalohany dia zavatra iray izay tsy maintsy heverina ihany koa. Tsy maintsy mijery azy isika ary mahatsapa azy. Tsy misy alika kely izay maharitra ora maromaro nefa tsy manafoana. Tokony ho mavitrika ianao ary hametaka toerana manodidina ny trano izay ahafahanao mampihatra ny fiofanana amin'ny taratasy, ary avy eo dia tsy maintsy arahianao izany hahitanao ny fotoana marina hanaovana azy io (avy eo hanomezako soa ianao hafetsena haminavina azy) ary afaka mamindra azy any amin'ny faritra misy azy.
Fitiavana sy arahaba soa
Tokony ho fantatsika fa ny fiarahabana avy amin'ny fo dia fanabeazana bebe kokoa ary manome anjara betsaka noho ny kiakiaka sy ny kapoka rehetra eto an-tany. Misy fomba fiteny izay mihatra amin'ity milaza hoe: "Afaka tantely eran'ny sotrokely ianao, mihoatra ny vinaingitra 10 litatra"… Ary marina izany miaraka amin'ireo alikanay. Tokony ho fantatsika fa mandritra ny fotoana iray amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy fantarintsika tsara ilay namantsika kely ary hanana fahazazany ihany izy, toa antsika ihany. Ary enga anie izy handany izany fahazazana am-pifaliana izany ary hahafantatra izay ilaina rehetra hiainana ny sisa amin'ny fiainany eo akaikintsika, andraikitsika izany.
Tsy maintsy miezaka manazava azy isika rehefa faly amin'ny zavatra nataony, mba hitenenanay azy indray andro any fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Tokony homentsika fotoana hahombiazana izany. Ilaina izany. Asehoy azy ny fitiavantsika ary mifanaraka amin'ny zavatra nataony izahay, mety izany no fandrisihana tsara indrindra hahatratrarana ny tanjontsika.
Fiofanana mikiaka amin'ny taratasy
Tokony ho mavitrika isika, ary manomana faritra maromaro ao an-trano na ao anatin'ny faritra ahafahanay manao azy ao anaty trano miaraka amin'ny gazety. Zava-dehibe izany.
Ny tsara indrindra dia mifoha eo akaiky eo izy na mamindra azy ao anatin'ny faritra isika raha vao mifoha amin'ny iray amin'ireo nofony, ary tazominay any izy, tsy misy herisetra ary tsy manery azy, mandra-pahafatiny.
Ka tsy maintsy miarahaba azy amin-kitsimpo sy mahomby isika, amin'ny fanehoana azy fa izany no antenaintsika aminy. Ilaina izany Andao ataontsika amin'ny fomba tso-po izany, raha tsy hitany. Sarotra ny mamitaka alika kely, na dia toa tsy toa antsika izany. Tsy maintsy tso-po araka izay azo atao isika ary manome azy ny lanjan'izany ho azy. Tokony hanokana ny fotoanany ho azy isika.
Vantany vao vita ny orinasanao, tsy maintsy avelantsika izy hiala ny faritra voaomana amin'ny gazety, ary manao izay tiany izy na izay efa nomaninay ho azy, tsy mitsahatra ny mahafantatra ny momba ilay zanakay kely, satria io no fotoana fanaraha-maso. Efa fantatsika fa hisy zavatra hatao indray ao anatin'ny 60 minitra, ka tsy maintsy manara-maso azy isika, Ary rehefa manomboka mamofona ny tany amin'ny oronao ianao afindra any amin'ny iray amin'ireo faritra voatondro izy mba hanamaivanana ny tenany ao anaty trano. Eo no tsy maintsy hiandrasantsika azy miandry izay hataony, hiarahaba azy tamim-pahatsorana indray. Eo am-piandohana ireo faritra izay omaninay miaraka amin'ny gazety dia ho lehibe sy malalaka, ary rehefa mianatra isika dia hampihena azy ireo.
Ireo torolàlana ireo dia tsy maintsy arahana, mandra-pahatongan'ny nosy irery mandehana manamaivana ny tenanao amin'ireo faritra misy gazety.
Ary ankehitriny, fanaraha-maso
Raha maharitra ny fanaraha-maso dia tsy mitandrina ny alika kely ary atao any ivelan'ny faritra nomena alalana, tsy tokony hananatra azy isika raha tsy hoe tratrantsika miaraka amin'izay izy, fa ny hataontsika dia ny maneso azy ary mibedy azy, tsy mamely azy velively, ary ambonin'izay rehetra tsy tokony hanao izany mihitsy raha tsy hitantsika manao azy io. Raha tsy mahita azy isika dia tsy afaka manafay azy. Mila misambotra azy tsara io rehefa manao azy, fa raha tsy izany tsy hitondra soa ho antsika izany. Amin'ny voalohany dia tsy maintsy maharitra ny fanaraha-maso.
Ny fotoana ahitanao fa efa hikotrika na hanina izy, ento any amin'ny faritra akaiky indrindra izay azonao ary avelao any izy hampitony azy ireo ary hiarahaba azy amin'ny feo tsara sy ny fihetsika miahy rehefa vita.
Ahoana no manadio
Tena zava-dehibe diovina amin'ny taratasy na lamba mpitroka avy eo ny harafesina, avy eo apetaho amin'ny mpanadio fofona mavesatra ny mop, Zava-dehibe tokoa ny fanarahana an'ity protokol ity, satria tsy tokony hadio, na oviana na oviana, madio mihitsy aloha ny mop na izay hataontsika dia ny manaparitaka ny fofona. Tsy hanadio karipetra na karipetra amin'ny rano koa izahay, na ny hanaparitaka ny fofona fotsiny no hataontsika. Tokony hampiasa mpanadio isika mba hahazoana antoka fa hanjavona ny fofona.
Ilay taratasy nodiovinay, hapetratsika eo ambanin'ny gazety sasany izany ao amin'ilay faritra namelantsika ny alika hanamaivana ny tenany, hanentanana ny fofony.
Tena zava-dehibe esory tanteraka ny fofon'ny alika kely avy amin'ny faritra izay tsy namelantsika hanala ny tenany. Ilaina ny manao azy tsara, raha tsy izany dia handeha hankany indray ny alikantsika hanao azy.
Tena ilaina ny feon'ny feo
Tena ilaina koa ny feon'ny feo. Raha ny marina dia tena zava-dehibe izany. Ny kiakiaka sy ny kiakiaka dia hahatonga ny alikantsika hatahotra antsika fotsiny, izay hitarika azy tsy ho tia antsika intsony, zavatra manimba ny fifamatorantsika ara-pihetseham-po aminy, na eo aminy izany na amintsika. Ny filamatra dia ny mibedy azy amin'ny endrika maneso, ary rehefa vita izany dia aza raharahanao mandritra ny fotoana fohy, manalavitra ny saina araka izay azo atao amin'io fotoana io. Tokony hananatra azy ianao amin'ny heriny mitovy amin'ny zaza tratranao hosodoko amin'ny rindrina amin'ny tsaoka. Mikatsaka ny hampianatra nefa tsy mampivadi-po.
Misy rano foana eo am-pelatananao
Tokony hanana rano madio be foana eo an-tànany ilay alikakely, mba tsy hampitombo ny olana. Mila misotro matetika ny alikakely. Ny tsy fisian'ny rano be dia be eo amin'ny rantsantanany rehefa ilainy izany, dia loharanon'ny fihenjanana ho an'ny biby fiompintsika, ary izany dia zavatra izay tsy tokony avelantsika.
Ary amin'ny alina
Tena zava-dehibe ny fiatrehana an'io olana io amin'ny lojika, ary araka ny efa nolazaiko, mazotoa. Raha hitondra alika kely any an-trano isika dia tsy maintsy fantatsika fa tsy maintsy mampianatra azy hanamaivana ny tenany isika, ary noho izany dia tsy maintsy mamorona drafitra isika.
Ao anatin'ity drafitra ity, ankoatry ny fandinihana ireo anton-javatra rehetra efa nofintininay, dia tsy maintsy fantarintsika izay hataontsika amin'ny alina, na amin'ireo fotoana izay tsy misy fanaraha-maso izany, Ny alikantsika kely dia hameno ny trano amin'ny urin sy seza.
Ny safidy tsara indrindra dia ny mametraka an'io olana io ho toy ny zavatra tsy maharitra, mba tsy hanomezana azy io karazana valiny ara-potoana, ary tsy ho mandrakizay. Ilaina io fahitana mialoha io.
Raha hanana alika kely any an-trano isika, dia tsara kokoa ny manazatra azy ny matory ao anaty efitrano na efitra fandroana na efi-trano, fa tsy mandalo mangatsiaka na hafanana mazava ho azy, ahafahantsika mampiasa amin'ny gazety mandritra ny alina. Raha niara-natory tamintsika isika, taty aoriana dia ho sarotra be ho antsika ny manomboka matory irery amin'ny alina. Azontsika atao ihany koa ny mametra ny ampahany amin'ny efitranontsika ho azy, ary manomana azy amin'ny alàlan'ny gazety. Na inona na inona safidy safidintsika, raha vao mifoha amin'ny torimaso isika dia tsy maintsy diovintsika amin'ny gazety manontolo, ary apetrakao madio indray ny ampitso. Ny tiana holazaina dia hoe rehefa mifoha amin'ny alina dia manala aina foana amin'ny faritra voaomana ho amin'izany.
Rehefa maka dia safidy
Rehefa hitanao fa indray alina dia nanatanteraka izay rehetra nilainy tamin'ny gazety izy dia manomboka manala gazety miandalana. manomboka amin'ny faritra akaiky ny toerana fatoriany ary miafara amin'ny lavitra indrindra.
Isika aloha dia manala ireo izay akaiky azy ary mamela an'io faritra io foana izahay mba hataony lavitra ireo zavatra kely fatoriany. Ny tsara indrindra dia ny manomboka amin'ny fanesorana takelaka iray isaky ny 48 ora, avela fotsiny ilay iray izay hita amin'ny toerana tena tiantsika hanaovana azy.
Ity fotoana ity dia mety haharitra 15 andro amin'ny alika kely ary hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 6 herinandro amin'ny alikakely 8 ka hatramin'ny 12 volana. Tokony hanana faharetana isika Ary satria fantatsika fa tsy tiany ny hanao izany, dia tsy afaka nanao izany mazava taminy izahay.
Rehefa mandeha ny fotoana dia manomboka mivoaka any ivelany ny alikantsika. Afaka manomana tranokala ho anao izahay na aiza na aiza alehanay, izay ho mora tokoa raha nanao izay rehetra nolazaiko tetsy ambony.
Afaka manamboatra tranokala ho anao amin'ny patio, amin'ny lavarangana na amin'ny arabe izahay. Tsy maintsy manao an'io isika raha tsy rehefa rahoviana aza misalasala fa fantatry ny alikanay izay natao ho an'ny gazety.
Ahoana ny fomba itondrana azy eny amin'ny arabe
Raha vantany vao manomboka mitsika ianao sy mifindra amin'ny taratasy napetrakay tao amin'ilay faritra voaomana, Miarahaba anao fatratra izahay. Izany dia hoe azony tsara izany ary tsara ny nanaovanao azy.
Raha tsy izany dia hijanona miaraka aminy mandritra ny fotoana fohy eo akaikin'ny faritra isika, hilalao aminy na hanala baraka azy, mandra-pahatongany mankany amin'ny taratasy izy ary manao izany. Raha nahavita tsara ny asanao ianao ary fantany izany dia azo antoka fa ho mora ity dingana ity.
Raha hitanao fa tsy manala ny tenany eny an-dalambe ny alikanao ary efa ela ianao no niaraka taminy, tsy misy zavatra mitranga. Omeo kilalao izy, miala sasatra ary ento mody, ary manandrama indray afaka adiny vitsivitsy.
Fetsy mora indroa
Tokony hitandrina ny famantarana izay asehony amin'ny fitaintainanana, ary amin'izany fotoana izany dia hiaraka aminy ho any ivelany hihiaka na hanondrika. dia tsy maintsy miaraka aminao foana hahafahanao manome valisoa anao ary lazao aminy fa tsara ny asany.
Tsy tokony hody mihitsy isika, fa mikiaka na mikiaka, na manomboka mitazona mba haharitra kokoa ny dia. Ajanony izy, ny mampakatra azy eo no ho eo taorian'ny nanalefahany ny tenany dia sazy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Mila mijanona miaraka amin'izy ireo eny an-dalana mandritra ny 10 na 15 minitra ianao alohan'ny hiakaranao, hilalaovana na hanao hetsika hafa. Protokol tsara harahina, dia ny manome azy milalao raha vantany vao manao ny zavatra ilainy voalohany. Ho fantany fa manomboka ny lalao raha vantany vao ataony izy ireo ary izany dia hahatonga azy ho zatra manao azy vantany vao lasa izy.
ny fitiavana no lakile
Ity lohahevitra ity (ilay izay mila ny filàny ao an-trano nefa tsy te-hanao) tsy maintsy manatona azy amin'ny fitiavana sy ny fitiavana. Ny alika dia tsy kilalao, tsy zavatra izany, fa fiainana manana filàna, faniriana voajanahary, faniriana ary faniriana ary tokony ho fantatsika izany hatramin'ny fotoana voalohany nitondrantsika azy io tany amin'ny fianakaviantsika. Tsy afaka mitantana tsara ny fanabeazana ny biby ianao raha tsy mifandray tsara aminy ara-pientanam-po. Tsy azo atao fotsiny izany, ary bebe kokoa amin'ny alika kely.
Ny fomba hankasitrahana ny olan'ny alika manala ny tenany ao an-trano rehefa olon-dehibe dia zavatra hafa tanteraka amin'ny fony izy alika kely. Ary izany no mahatonga ity toko ity hifantoka amin'ny fanentanana bebe kokoa.
Hieritreritra aho fa alika olon-dehibe io izay avy amin'ny trano fitotoam-bary na alika nanova tompona na zavatra mitovy amin'izany. Raha tsy izany dia tsy haiko ny mahatakatra ny fomba namelan'ny olona iray hamindra ny alikany sy hitsika azy an-trano nandritra ny taona maro, nefa tsy nitady fanampiana manokana. Tsy azoko izany.
Adin-tsaina amin'ny alika olon-dehibe
Ny alika olon-dehibe izay miova amin'ny fiainany, na dia fanatsarana aza izany, dia hilentika tanteraka ao anatin'ny dingana iray izay hampiasan'ny rafi-pitabatabana fangorahana ny rafi-pitaintainany, amin'ny famokarana ireo neuronany ireo hormonina miady saina, izay rehefa voangona dia mila fotoana, faharetana ary asa amin'ny alàlan'ny olona mampianatra ilay biby, mba hahafahany manala azy amin'ny vatana.
Mba hamongorana azy ireo, fanovana maro no tsy maintsy ampiharina amin'ny fiainan'ny biby izay hanome azy ny filaminana ilaina hahitana ny fandanjana azy, ary amin'izay dia afaka manafoana ny hormonina miady saina.
Ity hormonina miady saina be loatra ity, hahatonga anao mila rano bebe kokoa, ary amin'ny fisotroana rano be dia be, mila mikiaka matetika ianao. Marina izany ary tsy misy intsony.
Ny fomba tsotra indrindra tsy mety
Misy izany mailo sy mifanaraka amin'ny olana mety hitranga amin'ny alika ary manampy anao amin'ny fomba ilainao.
Mikiakiaka, mibedy, manasazy na mikapoka alika olon-dehibe izay miantra ao an-trano, ankoatry ny tsy misy ilana azy dia wild ary tsy mitarika zavatra hafa ankoatry ny fanapahana ny fatorana ara-pientanam-po, izay tokony ho fototry ny fifandraisana amin'ny bibintsika.
Ilaina ny mandray an-tsaina rehefa mandray ny fepetra rehetra hiatrehana ny olana, izay angatahintsika bebe kokoa amin'ny alika noho ny biby hafa. Mangataka zavatra tsara kokoa aminy isika.
Ohatrinona no angatahinay amin'ilay alika?
Alika satria alika kely dia tsy tokony hiondrika an-trano, hianatra hamaly haingana ny feontsika, hihaino antsika na dia tsy eo aza isika ary efa niandry anay nandritra ny ora maro sy ora maro izy, sns sns. Mazava ho azy tsy mangataka karazana biby hafa izahay izay ampiasainay ho biby fiompy. Na ny saka na ny boloky na ny trondro dia tsy voatery hanala ny tenany ao an-trano. Manana faritra voaomana ho an'ny ao an-trano izy ireo amin'izany fotoana izany. Eritrereto ny zavatra angatahinao amin'ny biby.
Mila miombom-pihetseham-po amin'ny biby ianao ary hahafantatra fa ny alika dia biby madio voajanahary. Tsy tiany ny manala ny tenany ao an-trano. Imbetsaka dia resaka fotoana alohan'ny hahalalany azy. Imbetsaka ny amin'ny fampiasana ny fahatakarana sy ny lojika, ampiarahana amin'ny torolàlana sy ny kaonty izay manampy antsika hamindra ny toe-javatra any amin'izay tiantsika, amin'ny fampiasana ny fitiavana sy ny faharanitan-tsaina.
Fantaro ny olana
Alika olon-dehibe niaritra fiovana maro tamin'ny fiainany na vao natsangana, na nanova fianakaviana, dia mora mahatsapa fihenjanana sy Na dia maharitra aza io dingana io dia mila mikiaka mihoatra ny mahazatra ianao. Tokony ho fantatsika fa rehefa misafidy ny handray alika isika dia mitondra ireo olana aterak'io alika io na mety hitranga koa.
Alika olon-dehibe matetika dia biby madio fa tsy te-hanala ny tenany ao anatin'ny tranon'ny fianakaviana izy. Mety ho lasa ara-dalàna ho anao ny tratry ny lozam-pifamoivoizana indray andro any, na izany aza, raha ataonao mahazatra, dia famantarana fa manana olana ara-pahoriana ianao. Tsy maintsy manam-paharetana sy mahatakatra izany isika amin'ny dingana iray fotsiny.
Izany no antony hamafisiko indray fa rehefa alika ny alika iray na noho ny fanovana ny adiresy na ny fananganana azy, na noho ny fifantohan'ny adin-tsaina ao an-trano, mangetaheta ianao matetika satria mila rano bebe kokoa, Ity hetaheta ity dia mameno haingana ny tatavia ary raha tsy maintsy mitazona ianao dia hiteraka adin-tsaina bebe kokoa, ka hangetaheta ianao ary mila rano bebe kokoa, ka hanomboka loop. Raha mibedy azy koa isika na manome tsiny azy, ary ambonin'izany dia mahery setra isika amin'ny fanaovana izany, dia hanisy rano bebe kokoa amin'ny afo isika. Tsy safidy mety izany.
Ny safidy mety
Ny safidy mety amin'ny alika olon-dehibe dia ny fanekena fa hitranga amin'ity toe-javatra ity mandritra ny fotoana fohy izay mahatonga antsika hahatsapa ho tsy mahazo aina, ary avy eo hiasa amin'izany:
Ny zavatra voalohany dia ny manafoana ny loharanom-pahasahiranana rehetra, ary koa ny fiaraha-miasa amin'ireo fitaovana voalaza etsy ambony toy ny forecasting sy fanaraha-maso.
Manoro hevitra foana aho ny hiomanana. Tsy maintsy soratantsika ny ora sy ny fotoana hanaovana ny filanao, raha te hanana hevitra manodidina ny ora sy ny fotoana anaovany azy.
Tokony hiezaka ny hampidina izany isika amin'ireo ora izay anaovany an-dalambe izany matetika ary rehefa vitany izany dia omenao kilalao na sakafo izy.
Tsy afaka mibedy azy isika. Azontsika atao ny maneso azy (amin'ny endrika malefaka sy sariaka), saingy ihany ary raha sendra azy manao azy eo no ho eo isika.
Tokony hadio tsara isika miaraka amina taratasy mitroka sy mpanadio ranona maimbo mahery ny toerana izay nanaovanao azy.
Alika kivy mila mivoaka matetika ianao vao afaka manome anao ny safidy hanaovana azy any. Omeo loka foana ianao amin'ny fomba fanaovana saosisy.
Rehefa eny an-dalana ny zavatra ilainy dia tsy mody haingana mihitsy izahay fa handany 5 na 10 minitra miaraka aminy.
Raha azo atao, azonay atao ny manana faritra faritra gazety ho anao ary tsy holazainay aminao izany na inona na inona raha ataonao any izany. Mety ho alika be fihenjanana ianao. Raha vantany vao ahena ny fihenjanana amin'ny biby ka hitantsika fa mifandanja izy, dia hofoanantsika ilay faritra voaomana.
Mila manome ny fotoananao ianao ary mitady vaovao momba ny fomba ahafahantsika mampihena ny fihenjanana amin'ny biby.
Tokony hanana faharetana isika
Zava-dehibe ny manome ny fotoananao sy ny toeranao amin'ny olan'ny alikantsika fa tsy mihetsika mahery amin'ny olana atolotray antsika. Alika maro alain'ny zaza natsangana no naverina tany amin'ny toeram-pialofana noho ny tsy fahafahan'ny mpisolo tena mampianatra azy ireo hanala tena eny an-dalambe ary io dia azo sorohina amin'ny fahatakarana bebe kokoa sy fahalalana fa zavatra vonjimaika izay azo vahana amin'ny fitiavana sy faharetana.
Raha tsy milaza aminao bebe kokoa izany amin'ny manaraka ary mikarakara ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampijanonan'ny alikako ny fivalanana ao anaty trano
Raquel dia hoy izy:
Salama tsara, manana alika 1 taona sy 3 volana aho, efa nananako izy hatramin'ny naha alika azy, andao hampianatra azy hanome izay ilainy amin'ny soakers, ao anaty trano aloha ary avy eo eo amin'ny lavarangana, ary noraisiny tsara izany tsara. Tokony ho 4 volana lasa izay dia nanomboka nanala tena teny amin'ny arabe izy, rehefa nentiny nandeha an-tongotra izy, satria ririnina ary nakatona ny lavarangana ka tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny niaritra izany izy. fa izao izy miverina mitsika amin'ny lavarangana indray, ary kotrana. Tsy haiko hoe rahoviana. satria alina na antoandro na hariva no anaovany an'izany rehefa matory isika na tsy ao an-trano. Mivoaka in-3 isan'andro izy ary hahatratra azy eo noho eo ny fandaharam-potoana. izany no tsy azoko hoe maninona no ataony…. Izay hevitra rehetra afaka manampy ahy azafady
Mamaly an'i raquel
Salama Antonio. Novakiako ny lahatsoratrao ary tiako be ny fanazavanao sy ny fanazavanao ny tokony hampianarana ny zanak'alikao amin'ny fitoniana sy ny fitiavana.
Ny ahy dia manana alika kely collie manodidina ny 8 volana izay tena mavitrika sy be fitiavana, tena marani-tsaina ary marani-tsaina. Fa izaho efa kivy be satria nahavita boka izy ary izao tsy haiko intsony ny manala azy.
Efa mikiaka sy mandeha an-dalambe eny an-dalambe izy, mivoaka in-4 isan'andro, ny mandeha farany dia amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 tolakandro mandritra ny adiny iray ary amin'ny 23 alina dia mivoaka hihaona ny voalohany eo anelanelan'ny 6 sy 7 maraina izy.
Saingy efa nahazatra azy ny mandoto sy mikiaka ao amin'ny efitrano iray izay ananantsika amin'ny lakaly antsasaky ny alina. Rehefa midina amin'ny maraina aho manasa, fantany fa tsy nety ny nataony satria manaraka ahy izy ary mampidina ny sofiny ary mahita ahy foana. (Wow, fanehoan-kevitra daholo izany)
Tsy haiko na handeha ho any amin'ny etolojia na hanandrana zavatra hafa. Ny marina dia manomboka manana olana amin'ny vadiko aho noho io zava-misy io.
Manana alika hafa aho, mpiandry ondry alemà 10 taona, tena mahay sy nahita fianarana izy, navelany hihinana tamin'ny lovia aza izy fa hitako fa izy no manjakazaka, mety misy ifandraisany ve?
Misaotra betsaka mialoha.
Conjunctivitis Canine: antony sy soritr'aretina
Ahoana no hahalalana raha bevohoka ny alikako